तिन घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय, स्कुल पुग्दा भोक लाग्छ कसले दिने खाजा ? – Saurahaonline.com
तिन घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय, स्कुल पुग्दा भोक लाग्छ कसले दिने खाजा ?
चितवन, २३ असोज । राप्ती नगरपालिका सामराङका पन्ध्र वर्षिय मंगराम प्रजा दैनिक तिन घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय जाने गर्छन् । राप्ती नगरपालिका– १२ यौरालीटारको श्री गणेश माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रजा अध्ययनका लागि नजिक विद्यालय नहुँदा दैनिक तिन घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय ओहोरदोहोर गर्न बाध्य भएका हुन् । उनलाई स्कूल पुर्याउन न अभिभावक जान्छन, न त साथीहरु नै हुन्छन् । विद्यालय भन्दा तिन घण्टा टाढा प्रजाका परिवार किसानी हु्न् ।